Mas'uul safray 400 kiiloomiitar oo dhibaato u horseeday Boris Johnson
LONDON, United Kingdow - Ra'iisul wasaaraha waddanka Britain, Boris Johnson, ayaa hadda bartamaha u galay qalalaase siyaasadeed kaddib markii uu soo ifbaxday war tilmaamaya in la taliyihiisa uu ku safray gudaha iyaddoo Covid-19 jiro.
Dominic Cummings waa la taliyaha ra'iisul wasaaraha UK, wuxuu Isniintii sheegay "in dhaqan macquul ah uu sameeyay" markii uu booqasho ku tegay deegaanka Durham oo ku yaalla waqooyi bari England si uu usoo eego hanti ay leeyihiin waalidiintiisa.
Xilliggaas waxaa la socday xaaskiisa oo xannuunsan. Cummings wuxuu sheegay in xaaskiisa iyo isagaba "ay wajahayeen xaalad adag" oo ku saabsan daryeelka canugooda.
Ra'iisul wasaare Boris Johnson wuxuu taageero u muujiyay taliyihiisa siyaasadda oo uu sheegay in sharciga uu u hoggaansamay markii uu safrayay isla maarkaana uu raacay talooyinka caafimaad ee looga hortaggayo cudurka.
"Waxaan ogahay in malaayin qof ay la xannuunsan yihiin cudurka halka kumananaan qof ay u dhinteen," ayuu yiri Cummings.
Xilli dhibaatada cudurka ay saameyn ba'an ku reebtay UK, dadka waxay ku tiirsan yihiin dowladda marka ay timaaddo helidda wararka ka farxinayo.
Sida ku xusan aragti dadweynaha waxay muujineysa in taageerada loo hayo Ra'iisul wasaare Boris Johnson iyo dowladdiisa ay sare u kacday.
Inkasta oo aan lasoo dooran, Cummings waxaa lagu tilmaamaa in uu yahay maskaxdii ka dambeysay ololihii Britain ay kaga baxday Midowga Yurub iyo guushii uu doorashada ka gaaray Ra'iisul wasaare Johnson.
Haatan, waa la taliyaha ra'iisul wasaaraha Britain.
Inta badan khudbadaha waaweyn waxaa soo diyaarsada ra'iisul wasaaraha balse fikradaha waxay ka yimaadaan Mr Cummings.
Wuxuu ku anddacooday in taageero uu ka helay ra'iisul wasaare Johnson, waxay arrintani muujineysaa sida uu uga walaacsanaa xaaladda caafimaad ee canugiisa.
Arrintani maxaa loo daneynayaa?
Shaki kuma jiro in arrintani ay tahay caqabaddii ugu weyneyd ee soo wajahaday siyaasadda Boris Johnson, waxaana lagu saleeyay labo arrimood.
Tan koowaad: Dad badan waxay ka careysan yihiin ficilka la taliyihiisa, dadka waxay aaminsan yihiin in shacabka iyo saraakiisha dowladda uu hagayo hal sharci.
Dadka qaarkood ayaa si caro leh uga hadlay arrintani, tobonaan kun oo qof ayaa sheegay in sida ay ku dhici karto arrintaas maadaama la booqan waayay dadkii geeriyoonayay ama laga qeybgeli waayay aaska dadkii u dhintay feyraska Korona.
Xildhibanaada ka tirsan xisbiga xukunka haya ee Conservative-ka ayaa ka walaacsan arrintani, halka qaar ka mid ah xildhibaanadan ay shaki ka muujiyeen xaaladda la soo deristay ra'iisul wasaaraha.
Hadda, dadkii ay matalayeen ayaa qoraallo caro leh u diraya, waxayna ka walaacsan yihiin in Johnson uu ka adkaaday shaqadiisa iyo in kale.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in Ra'iisul wasaaraha, Boris Johnson, uu taageero ka heysto xildhibaanada, waxaa jira dareenka ah in inta badan siyaasiyiinta xisbiga Conservative-ka ay garab taagan yihiin Ra'iisul wasaarahooda iyo dowladdooda.
BBC + GO
Fahfaahin cusub oo laga soo saarey xaalada caafimaad ee Boris Johnson
Caalamka 08.04.2020. 07:14
Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa habeenkii labaad ku qaatay Isbitaal markii uu soo ritay Coronavirus.
Warbixin laga soo saarey xaalada caafimaad ee ra'iisul wasaaraha UK
Caalamka 07.04.2020. 07:54
Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda UK oo wajahaya maxkamadeyn
Caalamka 16.05.2019. 03:42
UK oo lacag dul-dhigtay Soomaali ay ku raadjoogo muddo laba sano ah
Caalamka 31.08.2020. 09:40
Muhaajiriin ay Soomaali badan kamid tahay oo gacanta lagu dhigay
Caalamka 16.07.2020. 21:00
Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo xukuumadiisa isbitaal ka maamulaya
Caalamka 06.04.2020. 15:07
Ilaalo ra'iisul wasaare oo loo eryay in uu hub kaga tegay suuli diyaaradeed
Caalamka 05.02.2020. 15:25
UK oo ka hadashay heshiiska xisbiyadda Somaliland ee doorashada
Somaliland 12.07.2020. 19:00